Wednesday August 05, 2020 - 10:44:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar qorshaysan oo xalay fiidkii ka dhacay gudaha deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubbada Hoose.
Ilo wareedyo amni ayaa xaqiijinaya in dagaalyahanno Jihaadi ah ay weerar gaadma ah ku qaadeen guri kuyaal deegaanka Qooqaani halkaas oo uu deganaa mas'uul katirsan maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland isku magacaabay.
Weerarka ayaa sababay in xoogag hubaysan ay gurigiisa ku dhax dilaan Max'med Bile oo ahaa guddoomiyihii hore ee Qooqaani islamarkaana ahaa sarkaal wada shaqeyn dhow laleh ciidamada gummeysiga Kenya ee deegaankaas xoogga ku jooga ku dhowaad 8 sanadood oo xiriir ah.
Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa markii ay dileen guddoomiyihii Qooqaani waxay baacsadeen qaar kamid ah ciidamadii ilaalada u ahaa waxayna ku guuleysteen in ay nolosha kusoo kaxaystaan hal askari oo hubaysan.
Idaacadda Andalus ee Afka Al Shabaab ku hadasha ayaa xaqiijisay in ladilay guddoomiyihii deegaanka Qooqaani islamarkaana lasoo kaxaystay Askari hubaysan.
Todobo maalmood gudahooda waxaa deegaannada Hoosingoow,Qooqaani iyo Kulbiyoow ka dhacayay weeraro safballaaran oo ay xoogaga Al Shabaab ku beegsanayeen shisheeyaha iyo kuwa la shaqeeya.